बान्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई आफन्तबाटै भारतमा १० हजारमा बे’चिइन् ! – Life Nepali
बान्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई आफन्तबाटै भारतमा १० हजारमा बे’चिइन् !
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । बा’न्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई १५ वर्षीय बालिका आफन्तबाटै बे’चिएको खुलासा भएको छ । काठमाडौँको एक होटलमा काम गर्दै गर्दा आफन्त पर्ने नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–६ घर भई हाल ललितपुरको चापागाउँ बस्ने कान्छी तामाङ (सुनिता तामाङ) भन्ने कृष्णमाया लामाले बालिकालाई पढाई दिने प्रलोभनमा पारेर भारतमा बेचेको प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।फ़ाइल तस्बिर
मा’नव बे’चबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मु’द्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्त लामाले २०६८ सालमा आफ्नै नजीकको नाता पर्ने बालिकालाई यसरी बेचेको खुल्न आएको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिनुभयो । आ’रोपी लामालाई आठ वर्षपछि आज प्रहरीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित देउवाचोकबाट प’क्राउ गरेको छ । उक्त घ’टनामा संलग्न रहेको आ’रोप लागेका सोही ठाउँका ४२ वर्षीय शेरबहादुर लामा भने फ’रार रहेको प्रहरीको मानव बे’चबिखन नि’यन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ ।
“उनले बालिकालाई घर जाने बहानामा बसमा चढाई बान्ता नआउने औषधि भनी लठ्याउने औषधि खुवाएर भारत लगेको र उनी होसमा आउँदा भारतको मधुन भन्ने ठाउँमा पुगेको खुल्न आएको छ”, प्रहरी उपरीक्षक थपलियाले भन्नुभयो । लामाले दोस्रो दिन सोही ठाउँको एक कोठी सञ्चालक लक्ष्मी र हेमालाई १० हजार भारतीय रुपैयाँमा बेचेको ब्यूरोले जनाएको छ । यो खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।
Previous यी ११ सपनाले मानिसको मृ’त्युको संकेत गर्छ !
Next निर्दोष आलमलाई फ’साउन राज्य, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सबै लागे – अधिवक्ता श्रेष्ठ !